Mianara milalao mahafinaritra | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 10, 2011 Alatsinainy Oktobra 10, 2011 Douglas Karr
Raha mijery ny tantaran'ity bilaogy ity ianao dia hahita fa faly izahay mahita teknolojia vaovao sy mampianatra azy ireo ny mpamaky azy. Raha tsy hoe manao zavatra vetaveta ny olona iray na manao hadalana tsotra fotsiny, dia mazàna no tsara ny fomba fijerintsika. Tsy tiako ho lehibe loatra ity bilaogy ity ka afaka mandevina orinasa sasany isika mandritra ny fampiroboroboana ny hafa… ary tena manala baraka ahy izany raha ny sasany amin'ireo mpiara-miasa amiko malaza kokoa no manao izany ampahibemaso.
Vao omaly aho dia nahazo fitarainana avy amin'i trolls. Inona ny troll?
Ao amin'ny fitenin'ny Internet, ny troll dia olona iray mandefa hafatra manelingelina, ivelan'ny resaka na tsy misy lohahevitra ao anaty vondrom-piarahamonina an-tserasera, toy ny forum fifanakalozan-kevitra an-tserasera, efitrano fifampiresahana, na bilaogy, miaraka amin'ny tanjona voalohany hahatonga ny mpamaky hanao valinteny mampihetsi-po na raha tsy izany manelingelina ny adihevitra amin'ny lohahevitra mahazatra.
Hanampy toetra roa hafa aho… ny troll dia kanosa matetika ary miafina tsy miafina. Ary amin'ity bilaogy ity, matetika ny troll dia manandrana manimba ny orinasa nosoratanay.
Hiezaka aho indraindray hamaly troll, fa rehefa mahita azy ireo miantso ny anarana sy tsy miraharaha ny zava-misy aho dia mijanona tsy miresaka amin'izy ireo. Nampahafantariko ny orinasa fa notsikeraina izy ireo. Raha manandrana mamaha ny toe-javatra ny orinasa ary tsy afaka (izay mahazatra noho ny tsy fanonona anarana) dia hesoriko ny hevitra.
Fa maninona Sa tsy izany dia manome pasipa ny orinasa iray? Tsy manao ny marina ve izany?
Heveriko fa tsy izany. Rehefa manadinadina orinasa aho, mahazo pikantsary, ary mamaritra ny fampiharana azy ireo, tsy manandrana mandray fanapahan-kevitra mividy ho anao aho. Manoratra lahatsoratra bilaogy fohy mifototra amin'ny marketing, hevitra na famaritana ny vokatra ato amin'ny orinasa aho ary mizara hoe inona ilay fitaovana ary ahoana no hinoako fa afaka manampy mpivarotra izany. Ireo orinasa ireo dia niasa mafy mba hamoahana ny vokatra iray ary hanao risika lehibe amin'ny alàlan'ny fitsikerana azy ireo any ivelany.
Ny olona sasany dia mankahala orinasa tsotra (mahita an'izany betsaka isika tato ho ato). Manana vatomamy ho azy ireo aho satria niasa tamina fanombohana tanora marobe. Hitako ny fahafoizan-tena - amin'ny vola, fotoana ary fianakaviana - izay ataon'ny olona mba hanandramana haka zavatra avy amin'ny hevitra iray, ka hatramin'ny nofinofy iray. Mila asa an-taoniny maro izany… ary tsy mahomby ny ankamaroan'ny orinasa. Tsy tiako ho potika ny orinasa… mijery ny mpanorina sy ny mpiasa very ny zava-drehetra. Tsy tokony hisy.
Ny fanehoan-kevitra iray tokana dia mety hametraka orinasa amin'ny fiarovana. Hitako fa nanjo ny iray tamin'ireo orinasa niasako izany… nisy nitsikera ilay orinasa an-tserasera ary tsy tafarina intsony izy ireo hatramin'ny nielezan'ny dokambarotra tamin'ny resaka nifanaovana tamin'ny taona manaraka. Masiaka ilay izy… ary tsy nilaina izany. Tsy ny mpitondra irery no mahay manao azy intsony, na… ny votoaty tsotra iray dia mety hiteraka tsipika mitarika orinasa iray eo ambany.
Noho izany, tsapako fa manana andraikitra amin'ireo mpamaky roa aho ary orinasa amin'ny fanomezana ny olona ny tombotsoan'ny fisalasalana. Raha misy mpitsikera te hiala amin'ny aloka ary mitsikera mafy ny orinasa iray - resaka tsara izany. Fa rehefa misy troll miantso sy mamono an-tsokosoko ilay lahatsoratra, tsy handefitra amin'izany tsotra izao aho. Valiako indray mandeha na indroa dia vita ny resaka. Raha manohy izy ireo dia tsy hanome azy ireo fotoana hafa intsony aho.
Betsaka ny orinasa tsy nahaja ahy intsony nandritra ny taona maro… saingy tsy hiezaka ny handrava azy ireo aho. Tsy manome saina azy ireo ato amin'ity bilaogy ity aho. Izany no fotoana ananako - mampiroborobo orinasa lehibe ary tsy miraharaha ireo izay mila miala. Raha te-hanao fanamby amiko amin'ny iray amin'ireo lahatsoratro ianao dia raisiko an-tanan-droa ny tsikera! Fa raha hiantsoantso sy hiantso anarana fotsiny ianao dia tsy mila mihaino azy aho.
Manantena ny resakay mitohy aho!